Internetka Aduunka Oo Halis Ugu Jira In Uu Joogsado Sababtan Darteed | Xaqiiqonews
Saynisyahanada ayaa ka digaya cillad guud oo ku timaado internetka aduunka iyaga oo sababtuna ku qeexaya nidaamka cadceedda oo xumaanaya.
Khubarada ayaa ka digaya suurtagalnimada duufaano cadceed (Sun storm) oo xoog leh, duufaantaasi oo ah ah birlab danabeysan oo xoog leh waxa ayna halis ku noqon kara dhulka gaar ahaan qalabka birlab daneebyada ku ku shaqeeya sida fiilooyinka internetka, isgaarsiinta iyo dayax gacmeedyada.
Mid ka mid ah khubarrada Jaamacadda Kalifoorniya Sangeetha Abdu Jyothi waxa ay leedahay “duufaanta danbeysan ee cadceedda waxa ay dhacdaa boqolkii sanaba hal mar, laakiin boqolkii sano ee ugu dambeysan ma dhicin, sidaa darteed wax la fogeysan karo ma ahan in ay dhacdo inta aan noolnahay”.
200 sano ee ugu dambeysay, culimada xiddigiska ayaa diwaangeliyey labo dhacdo oo ah duufaanta cadceedda, iyadoo dhacdada ugu weyna ay aheyd dhacdadii “Carrington Event” oo dhacday 1859-kii, kolkaasi oo khadadkii taleefoonada uu damb ka kacay, waxaana lagu argay iftiinadii waqooyiga mandiqadda badda Karibiyaanka (caribbean sea).
Madaama waqtigan la joogo dadku si weyn ugu tiirsanyihiin tiknoolajiyadda, maxaa dhici karaa hadii uu dhaco “Duufaan cadceedeed” ?